Nubia Red Magic 6 waxaa la sii deyn doonaa Maarso 4 | Androidsis
Nubia Red Magic 6 ayaa la bilaabi doonaa 4-ta Maarso iyada oo 66W si dhakhso ah loogu soo dallacayo
Toddobaadyo gudahood ayaan kugu soo dhaweynaynaa aaladda casriga ah ee casriga ah, oo la sii dayn doono sida Nubia Red Magic 6 iyo sida ku cad xogaha baryahaan, waxay la imaan doontaa barxada mobilada Qualcomm's Snapdragon 888.
Terminal-ka wuxuu horey uheystey taariikh siideyn sax ah, waana Maarso 4. Maalintaas waxaan si buuxda u baran doonnaa mobilada, iyo sidoo kale inaan ahaano kan ay ku jirto Realme GT 5G.
Maxaan ka ognahay Nubia Red Magic 6 illaa hadda?
Ni Fei waa madaxweyne ku xigeenka Nubia. Tani waxay mas'uul ka ahayd ku dhawaaqista iyo soo bandhigida boodhadhka Red Magic 6. Tani waxay soo bandhigtay taariikhda la bilaabayo terminaalka waxqabadka sare leh, oo ah midka aan hadda soo xusnay: Maarso 4.
Qoraalka Fei, oo lagu sameeyay Weibo, waxaa la muujiyay in Red Magic 6 uu la imaan doono "afarta teknolojiyad ee ugu dhaqsaha badan." Boodhadhka sare ee wadaagga ah ee la wadaago waxaa sidoo kale ku jira afar astaamo oo ka hooseeya gaariga tartanka, oo laga yaabo inuu matalayo bandhig HDR, tiknoolajiyad xawaare sare leh, jawaab celin taabasho fiican, iyo taageere qaboojiye ah oo loogu talagalay waxqabadka joogtada ah ee saacadaha dheer ee ciyaarta.
Nubia's Red Magic 6 ayaa lagu sii deyn doonaa iyadoo tiknoolajiyad xawaareyn deg deg ah oo 66W ah. Kala duwanaanshaha Pro, dhinaca kale, wuxuu soo bandhigi doonaa lacag deg deg ah oo ah 120 W. Qalabka, sida noocyada horumarsan, ayaa sidoo kale la filayaa inuu la yimaado moobilka Snapdragon 880, in kasta oo la sheegay in tan lagu bilaabi karo Snapdragon 870, oo uga tagaya kor ku xusan Snapdragon 888 SoC walaalkiis ka weyn. Tani waa wax aan dib ka ogaan doonno.
Shaashadda taleefanka ayaa heleysa qiime heer sare ah oo ah 144 Hz. Si kastaba ha noqotee, wararka qaar waxay soo jeedinayaan inuu noqon doono 120 Hz, isagoo ka tagaya 144 Hz Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nubia Red Magic 6 ayaa la bilaabi doonaa 4-ta Maarso iyada oo 66W si dhakhso ah loogu soo dallacayo
Samsung waxay ku laaban kartaa Android Wear barnaamijyadeeda casriga ah
Hal cusbooneysiin UI 3.1 oo loogu talagalay Galaxy S20 FE ayaa dib loo heli karaa